အိမ်မက်စေရာ: September 2011
အဲ့ဒါလေးဖွင့်ကြည့်ပါလား.... .. စက်ရုပ်အထီးတဲ့း))
သိပြီးတဲ့သူတွေက သိပြီးလောက်ရောပေါ့ ထွက်တာတော့ကြာနေပြီ ခုမှ
အိမ်မက်ကတွေ့လို့လေ..စက်ရုပ်အမက တော့ဖွင့်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်.. ရတဲ့သူရှိရင် link လေး
တကယ် လူတွေနဲ့ စကားပြောချင်စိတ်မရှိလို့ အဲ့ဒီကောင်နဲ့စကားသွားပြောနေတာ..ဆရာသမား ကမခေဘူးဗျ...
အပျင်းပြေပေါ့.. တင်ချင်တာ တော့ဒီပို့စ်မဟုတ်ဘူး..တွေ့လို့တင်လိုက်တာ နောက်ရက်မှပဲ ရေးထားတာလေး
တင်တော့မယ်.. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပို့စ်လေးဆိုတော့ တင်ရင်ကောင်းမလား မတင်ရင်ကောင်းမလား
စဉ်းစားနေတာ..ပုံလေးကို တင်ချင်လွန်းတော့ ပို့စ်တော့ ရေးထားလိုက်တယ်..
ကဲ ကဲ နောက်မှ တွေ့ကြမယ်နော်.. ပျင်းရင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ စကားသွားပြောလိုက်ပါဦး..
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 10:56 AM6comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 2:23 AM 8 comments:
အလုပ်က အပြန်အဝတ်တောင်မလဲ နိုင်သေးပဲ ထမင်းစားနေရင်း blog လေးဖွင့်ကြည့်တော့ တွေ့ရတာက
ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း တစ်ညီတစ်ညွှတ်ထဲ တင်ကြဖို့ အကြောင်းလေးသွားဖတ်မိပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ အိမ်မက် စာအရှည်ကြီးရေးဖို့ လုံးဝမအားလို့.. တစ်ကြောင်းထဲပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်..
လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ် ..
ထမင်းစားပြီးရင် ချက်ချင်းအပြင်ပြန်ထွက်ရမှာမို့ စာအရှည်ကြီးရေးချင်ပေမယ့်.. ဒီလောက်လေးပဲ ရေးဖို့ အချိန်ရလိုက်ပါတယ်...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:29 AM 8 comments:
ကြည့်စမ်းပါဦး မြစ်ဆုံစီမံကိန်းတဲ့.....ငါတို့ဧရာဝတီကိုဖျက်ဆီးမယ့် သေမင်းရဲ့လက်နက်လေ.....မြင်ရက်စရာတောင်မရှိဘူး..စက်သံတွေ တဒုန်းဒုန်း ဖုံတွေ တလုံးလုံးနဲ့ ဧရာဝတီအလှကို ခြေနဲ့ နင်းချနေကြတာ.. ရင်နင့်လိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းရယ်
အတ္တသမားတွေ ပြုသမျှ ဧရာဝတီက နုနေရတာ..
တကယ်တော့ အသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ဧရာဟာ ငါတို့ခနာရဲ့ အသက်သွေးကြောပါ..
ခုတော့ ငါတော့ သွေးကြောကို ဖောက်ထုတ်လို့ သောက်စုပ်ဖို့ ကြံသတဲ့လေ..ရိုင်းလိုက်လေခြင်းကွယ်..
နောင်တစ်ချိန်ရဲ့ အနာဂတ် နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် ဧရာဝတီဟာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တော့မတဲ့လား..
မြန်မာပြည်မြေပုံကို လက်ငြိုးထိုးပြီး ဧရာဝတီရောလို့ မေးလာ တဲ့အခါ
ကူပါ ကယ်ပါ လို့သာ တစာစာ အော်လိုက်ချင်တယ်...
မြစ်ဧရာရဲ့ အလှ က ငါတို့ ရဲ့ ဘဝ
မြစ်ဧရာရဲ့ အသက် ငါတို့ အသက်ပဲမို့
မြစ်ဧရာရဲ့ အရေး ငါတို့ အရေးလို့ တွေး
( ကဗျာလဲ မဟုတ် စာလဲမဟုတ် ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး ရင်ထဲ ရှိတာလေး ချရေးဖြစ်တာ..)
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:52 AM2comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:40 AM9comments:
သစ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ထူးခြားအံ့သြဖွယ် ထူးဆန်းတဲ့ လက်ရာများပါ... ဒီလက်ရာများ တည်ရှိရာနေရာကို Amazing Forest ဆိုပြီးတော့လဲ တင်စားထားတာ တွေ့ရပါတယ်..
ခက်တာတစ်ခုက ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှာ တည်ရှိနေလဲ ဆိုတာကို ရှာလို့ မတွေ့နိုင်တာ ပါ..
သိတဲ့ လူရှိရင် တည်နေရာလေး ပြောပြပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ...
အဝင်ဝလို့ ယူဆရတဲ့ နေရာ
ထူးဆန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ လူသား
မြင်းဖြူစီးနေတဲ့ မင်းသမီးလေး ထင်ပါတယ်...
ဒီပုံအရမ်းလက်ရာမြောက်တယ်နော်... လူပိစိလေးတွေလဲ ပါတယ်..သူ့ပုံစံအတိုင်းကို လက်ကိုင်ပေါ်မှာလဲ ထပ်ထွင်းထားသေးတယ် ...တော်လိုက်တာနော်
ကလေးလေးတွေ တစ်ခုခုကို မျှော်ကြည့်နေပုံလေး...
ကဲ ကြည့်ပါဦး.. ကျားသစ်နက် နဲ့ ကောင်လေး ..အိပ်များပျော် နေသလား....????
ဒီပုံက နဲနဲ ကြောက်စရာကောင်းတယ်...ဒါပေမယ့်လဲ လက်ရာတော့ မြောက်တယ်နော်..တောကြီးထဲမှာ ဒီပုံတွေ့ရင် လိပ်ပြာလန့်နိုင်တယ်
ချစ်စရာလေး.. ကောင်မလေးရယ်... .လူပိစိလေးရယ်...ပြီး ....ဘာကောင်စီးထားတာလဲ မသိ ..
ပုံလေးတွေအရမ်းသဘောကျလို့ အားလုံးလဲ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ..ဓါတ်ပုံတွေကို Amazing Photo ထဲကယူပါတယ်......
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:54 AM6comments:
ဒေါ်ဒေါ် ရေ ဆီထမင်းစားချင်တယ်...
ဆီထမင်း စားချင်တိုင်း အဒေါ်ဆီမှာ ပဲ ပူစာနေကျပါ.. ကိုယ်တိုင်က မချက်တက်လို့လေ..အိမ်မှာတော့ မကြာမကြာချက်စားနေကျ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ ကို ကြည့်မထားမိတော့ ဆီထမင်းဘယ်လိုချက်ရမှန်းကို မသိတာပါ.. တစ်ရက်တော့ သိပ်စားချင် တာနဲ့ အဒေါ်ကို ဖုန်းဆက်မေးကြည့်ပြီး ချက်စားကြည့်ပေမယ့် အဆင်မပြေပါ.. ဇောက်နက်ပြီး ခွက်တဲ့ ဒယ်အိုးနဲ့ ချက်မိတော့ အကျက်က မညီ.. ရေများတော့ ပျော့ သွားတယ်.. ဆနွင်းများတော့ ဝါသွားတာနဲ့... ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင် သြော် ဆရာမပြ နည်းမကျ ဆိုတာလေ ဒါနဲ့ တစ်ရက်တော့ အဒေါ်အိမ်သွားပြီး သေချာကြည့်တော့မှ အော်ဒီလို ဒီလို ပေါ့နော် ...
ဒါနဲ့ ဒီနေ့ စမ်းချက်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်
တကယ်ဆို ဆီထမင်းကို ဂျာမနီရောက်မှ စားဖူးပြီး အရမ်းကြိုက်သွားတဲ့ ကောင်းကင်တစ်ယောက်ကို ချက်ကျွေးချင်တာလဲပါပါတယ်..
ကဲ အိမ်မက်ရဲ့ ဆီထမင်းလေး စားသွားပါဦးနော်..
ဆီထမင်းမှာ ကြက်သွန်နီထည့်ချက်ရင် ပိုစားကောင်းတယ်.. အစမ်းချက်ကြည့်ဒါမို့ မထည့်ဖြစ်လိုက်ဘူး..
ဝက်နံရိုးကင်လေးနဲ့ ဒါက ကောင်းကင်တို့ ဆိုင်က ပါ..ဝယ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး သူယူလာပေးတာ :p
ဒါက အဒေါ်ရဲ့လက်ရာ ငပိကျော်လေး....
ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ အိမ်မက်ရဲ့ Sunday ဆီထမင်းလေး ပါ
အားလုံး Gute Appetit ( စားကောင်းပါစေ) ရှင်........
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 2:59 AM5comments:
Labels: ကိုယ်တိုင်ချက် ပေါက်ကရများ
မနေ့က ရေးလိုက်တဲ့ အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ နော် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးမှာ ဝိုင်းဝန်းပြီး comment လေးတွေ အမျိုးမျိုးပေးကြတော့ နောက်ဆက်တွဲလေး ထပ်ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာပါတယ်..
comment လေးတွေ ဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိတာ ငါ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ရန်တိုက်ပေးသလိုများ ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်.. :p
တကယ်တော့ ..ဆရာ ဦးဟန်ကြည်ပြော သလိုပဲ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ပါ..
ဒါကလဲ အိမ်မက်တွေ့ဖူးသမျှနဲ့ အမြင်လေးပေါ့နော်.. အိမ်မက် ထပ်ပြီး မြင်မိတဲ့ အစိတ်အပိုင်း လေးတွေ ရှိပါသေးတယ်...
ဒါကတော့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု ပါ.... တကယ်တော့ အိမ်မက်တို့ မြန်မာ လူမျိုး အားလုံးနီးပါးဟာ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီးရင် မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းကြပါတယ်.. ဘယ်လို အလွဲလေးတွေ ပြဿတွေပဲ ရှိနေနေ ကြိုးစားပြီး ဖြေရှင်းတက်ကြတဲ့ လူမျိုးပါ...
ယောက်ျားဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေပေါ့နော်.. ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နောက်မီးလင်းတယ် ဆိုတာကလဲ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ရှားပါတယ်...ယောက်ျားတွေက ပါးစပ်ထဲ မှာ ရှိတာကို ခေါင်းထဲမထား လွတ်ကနဲ ပြောတက်ကြပေမယ့် ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက် မိန်းမအပေါ်မှာတော့ သစ္စာရှိကြတာများပါတယ်...ဒါလဲ အိမ်မက် မြင်ဖူးသလောက်ပေါ့နော်..
နောက်ကွယ်မှာ ရဲရဲ တင်းတင်း မျက်နှာပြောင်တိုက် ဖောက်ပြန်တက်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကတော့ တကယ့်ကို စာရိတ္တ ပျက်ပြားပြီး သစ္စာတရား မထားတဲ့ ယောက်ျားမျိုးပါပဲ..
အိမ်မက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်းလူမျိုး အမျိုးသမီးများ တော်တော်များများ ရှိကြတယ်.. သူတို့ အားလုံးက ဒီနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခွင့် ရဖို့ အတွက် ဒီနိုင်ငံသားကို တရားဝင် လက်ထပ်ထားတဲ့ သူတွေ ချည်းပါပဲ...
ပြဿနာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရှိပဲ ကိုယ့်အကျိုးခံစားရဖို့အတွက်တစ်ခုထဲကြည့်ပြီး လုပ်သလို ဖြစ်နေတော့ ယောက်ျားနောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်တော့တာပါပဲ... ပြောချင်တာက သာမန်ဖောက်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပါ.. ရဲရဲတင်းတင်းပေါ်ပေါ်တင်တင် ပါပဲ.. အားလုံးနီးပါးက ယောက်ျားရှိတဲ့အပြင် ရည်းစား ရှိတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ.. အဲ့ဒါကို ကြည့်ပြီး အံသြရမလို မအံ့သြရမလိုနဲ့ ကိုယ့်မှာလဲ မစီနဲ့ မဆိုင် အနေရခက်နေပါသေးတယ်...
ဥပမာ ..ပြောရမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားက အလုပ်လာပို့တယ် ..ကားပေါ်ကဆင်းတယ် ယောက်ျားက ပြန်ထွက်သွားတော့ ရည်းစားလက်တွဲပြီး အလုပ်ဝင်တယ် ..ကဲ
ညနေဆိုလဲ ဒီလိုပဲ ရည်းစားနဲ့ အတူတူထွက်လာတယ် ပြီး ကားနားရောက်ခါနီးလောက်မှ လက်တွဲဖြုတ် ကားပေါ်တက်.. ဒါလင်တွေ ဘာတွေခေါ် အာဘွားတွေ ဘာတွေပေးပေါ့...
လမ်းမှာများဆုံရင် ယောက်ျားနဲ့ ဆုံရင် ဒါငါ့ ယောက်ျားလေ..လို့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်
ရည်းစားနဲ့ ကြုံရင် ဒါငါ့ ရည်းစားလေ တဲ့...
ကိုယ့်မှာတော့ တွေ့တိုင်းလူတိုင်း အင်း တွေ့ရတာဝမ်းသာ ပါတယ် ..လုပ်နေရတာ.မျက်နှာ ပူလှပါတယ်..
သူတို့ လိပ်ပြာ လုံပေမယ့် ကိုယ့်မှာတော့ မလုံနိုင်ပါ.. ဒါကြောင့် နောင်များတော့ တွေ့တာနဲ့ ဝေးဝေးက ရှောင်နေလိုက်တယ်.. မသိသလိုပဲပေါ့.
ဒါကြောင့် ဂုဏ်ယူကျေနပ်စရာတစ်ခုကတော့ အိမ်မက်တို့ မြန်မာ လူမျိုးမှာ ဒါလောက် စာရိတ္တပျက်ပြားတဲ့ လူ မရှိသလောက်ကို ရှားတာပါ....
နောက်တစ်ခုက ပြောတော့ မပြောချင်ပါ..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်မက် အထင်ကြီးလေးစားရတဲ့ သူတစ်ယောက်မို့ပါ..
ချစ်ခင် ရတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး...
သူက ရုပ်ရည်သန့်ပြန်တဲ့ အပြင် စကားပြောယဉ်ကျေးတယ် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်တယ်...လူမှုရေးအလုပ်တွေမှာ အမြဲကူတယ်..
သူ့အမျိုးသမီးကလဲ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတယ်.. လူမှုရေးအလုပ်တွေမှာ ပါဝင်တယ်.. အိမ်မက်တို့လို အရွယ် တွေကို ဆုံးမ ပဲ့ပြင်ပေးတက်တယ်.. အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ သူတွေကို ကိုယ့်ခင်ပွန်းအပေါ်မှာ ဘယ်လို ဆက်ဆံရမယ် လေးစားရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ အမြဲ ဆုံးမလေ့ ရှိပါတယ်...သနားစရာကောင်းတာလေးတစ်ခုက အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက ကျန်းမာရေး အနည်းငယ်ချူချာရှာတယ် အစားအစာကို စားချင်တိုင်းစားလို့ မရတဲ့ နှလုံး ရော ဆီးချို ပါ ရှိတဲ့ သူပေါ့....
ဒီနေ့ အလုပ်မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အလုပ်အတူတူလုပ်ရင်း အလုပ်က ပါးတော့ စကားတပြောပြောပေါ့..
သူမက တူရကီလူမျိုး မွတ်စလင် ဘာသာဝင်ပါ..
လှတယ် သွက်တယ် ကလက်တယ်... အပြောရဲတယ် အနေအထိုင် ပွင့်လင်းလွန်းတယ်..
သူနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ကအတော့ကို ရင်းနှီးတာများပါတယ်..
သူမနဲ့ သူ( ကျွန်မ မိတ်ဆွေ ) က ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံတာကို တွေ့တာ တော်တော်လေး မျက်စိဆံပင်မွေးဆူးမိပါတယ်...သူမရဲ့ စာရိတ္တနဲ့ အနေအထိုင်ကြောင့် အကြောင်းသိ မြန်မာ ယောက်ျားလေးတွေ က ခပ်ခွာခွာနေကြတာများပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူနဲ့က ဘာလို့ အရမ်းရင်းနှီးတာလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားမိသေးတယ် နောက်တော့ လဲ မြင်ရပါများတော့ ရိုးသွားတာပါပဲ..
အဲ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ သူမနဲ့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ဖြစ်တော့ စကားပြောဖြစ်တာပေါ့..
သူမမှာ အမွှာ အမတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်လေ.. သူတို့ ညီအမက ပုံစံ အတူတူပါပဲ .. စာရိတ္တရောပေါ့..
ငါတို့ လူမျိုးမှာ အမ က အရင် လက်ထပ်ပြီးမှ ညီမက လက်ထပ်လို့ ရတာ ဒါကြောင့် ငါ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် ငါ့အမ အရင်လက်ထပ်တာကို စောင့်ရဦးမှာ ....တဲ့
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ.. နင့် အမ မှာရော ချစ်သူရှိလား လို့ မေးမိပါတယ်...
အင်း ရှိတယ် မင်းမင်း လေ တဲ့
ဘာ ဘယ် မင်းမင်း လဲ ဆိုတော့ သူမက နာမည် အရင်းကို စာလုံးပေါင်းပြပါတယ်..
အဲ့ဒီအချိန်မှ ကျွန်မ ပုံစံ ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ မြင်ကြည့်ကြပါ.. လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်ကို အုပ်ပြီး( တကယ့်ကို နာသလို ခံစားသွားရတာပါ) သူ့မှာ မိန်းမရှိတယ်လေ လို့ ပြောတော့ သူ့မိန်းမနဲ့ သူက အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး သူမညာဘူးဆိုတာ ငါယုံတယ် သူကလူကောင်းပါ တဲ့..
တစ်အိမ်ထဲ အတူတူနေတာ ဘယ့်နှယ် အဆက်အသွယ်မရှိရမှာလဲ ( စိတ်ထဲ ပြောလိုက်မိတာပါ)..
ငါ့ အမကို လဲ တော်တော် ချစ်တယ်.. ဒါကြောင့် သူလာရင် ငါက ခဲအို ခဲအို လို့ ခေါ်တာ လေ.. ငါ့ကို လဲ အရမ်းချစ်တယ် ငါတို့ အိမ်လဲ လာလာနေကျ တဲ့...
သူတို့ ချစ်သူဖြစ်တာ ၂ နှစ်တောင် ရှိပြီ တဲ့... ပြီး နင့် မျက်နှာက ဘာဖြစ်လို့ နီနေတာလဲ သူမက ကျွန်မမေးတယ်.
အဲ့လို စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင် ကျွန်မ ဟန်ဆောင်ဖို့ ခက်ပါတယ်.. ငါ ခေါင်းကိုက်လို့ပါ လို့ ပြန်ဖြေ ပြီး စကားဆက်မပြောဖြစ်တော့ပါ..
ညနေအလုပ်ဆင်းတော့ ကျွန်မအင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမ တစ်ယောက် ( ရုရှားလူမျိုးပါ) ကို ပြောမိတယ် ..သူမ ပြန်ပြောတာက အင်း ဟုတ်တယ်လေ အရင်တုန်းက တဲ့
ခုထိ သူတို့ ကြိုက်နေကျတုန်း ဆိုတော့.. အင်း ဟုတ်မယ်ထင်တယ် တဲ့
မျက်လုံးထဲမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးရတဲ့ ကျန်းမာရေးမကောင်းရှာတဲ့ အမ ကိုပဲ တောက်လျှောက်မြင်မိနေတယ်...
သူမသာ သိသွားရင် ချက်ချင်းတောင် လဲ သေသွားနိုင်တယ်..
၂ နှစ်လောက် ဖြစ်နေတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုကြီးက ဘာဖြစ်လို့ ဘယ်သူမှ မသိကြတာ လဲ ..
ဒီမှာ မြန်မာ သိပ်မများတော့ အားလုံး က အကြောင်းသိတွေ ချည်းလိုပါပဲ..
ဒါပေမယ့် သူ့ အကြောင်းတော့ ဘယ်သူပြောတာမှ ကို မကြားမိတာ
မသိတာလား.. သိရက်နဲ့ ဖုံးကွယ်ထားကြတာလား. မသိတော့ပါ..
စိတ်ထဲမှာတော့ လုပ်ရက်လိုက်တာ လုပ်ရက်လိုက်တာ....လို့ပဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြောမိနေတော့တယ်...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:43 AM3comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 10:19 AM7comments: